Ifayibha Optical Distribution Uzimele Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Fibre Optical Distribution Uzimele Factory
Ifreyimu yokusabalalisa i-fiber optic (ODF), enye ebizwa nge-fiber optic patch panel yakhelwe ukusabalalisa, ukuphatha nokuvikela ama-fiber cores ngesikhathi senethiwekhi yamanethiwekhi, emakamelweni emishini ye-CATV noma egumbini lemishini yenethiwekhi. Ingasetshenziswa nge-interface ehlukile ye-adaptha kufaka phakathi i-SC, ST, FC, LC MTRJ, njll. Izesekeli zefayibha ezihlobene nama-pigtails angakhethwa.
Ukuphatha inani elikhulu le-fiber optic ngezindleko eziphansi nokuguquguquka okuphezulu, amafreyimu wokusabalalisa we-optical (ODF) asetshenziswa kabanzi kusixhumi futhi ahlele i-fiber optical.
Ngokwesakhiwo, i-ODF ingahlukaniswa kakhulu ngezinhlobo ezimbili, okuyi-rack mount ODF nodonga mount ODF. I-Wall mount ODF imvamisa isebenzisa idizayini enjengebhokisi elincane elingafakwa odongeni futhi ilungele ukusatshalaliswa kwe-fiber ngokubalwa okuncane. Futhi i-rack mount ODF imvamisa modularity ekwakhiweni enesakhiwo esiqinile. Ingafakwa kuraki ngokuguquguquka okuthe xaxa ngokuya ngezibalo zekhebula le-fiber optic nezincazelo.
Jera fibre optic ukusatshalaliswa Uhlaka (ODF) wenziwe abandayo iphuma steel ipuleti ngu electrostatic sishaye ubuchwepheshe okuyinto has kakhulu ukuzinza kwemvelo kanye nesiqinisekiso isikhathi eside ukusetshenziswa. IJera ODF iyakwazi ukufaka ukuxhumana okuyi-12, 24, 36, 48, 96, 144, ne-fiber cores.
I-ODF ifreyimu yokusabalalisa i-fiber optic ethandwa kakhulu futhi ephelele enganciphisa izindleko futhi ikhulise ukuthembeka nokuguquguquka kwenethiwekhi ye-fiber optic ngesikhathi sokuthunyelwa nokunakekelwa.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane mayelana namafremu wokusabalalisa we-fiber optic.
Ftth yokubeka ukukhweza fibre optic ukusatshalaliswa Uhlaka, ...
Fibre patch patch, 1U-24-SC
19 yokubeka ukukhweza fibre optic ukusatshalaliswa Uhlaka 1U ...